बलिउड समाचार Archives | Cinemax Nepal Tv
बलिउड अभिनेता गोविन्दा नेपाल आउने भएका छन् । गोविन्दा कात्तिक २१ गतेबाट वीरगञ्जमा आयोजना हुन लागेको ‘नेपाल चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव’ मा सहभागी हुनको लागि नेपाल आउन लागेका हुन् । महोत्सवको आयोजक चलचित्र निर्माता संघले उनलाई विशेष अतिथिका…
२०१८ को अन्तिम समयमा रिलिज भएको फिल्म जिरो ले पहिलो दिन २०.१४ करोड कमाई गरेको छ । यो फिल्ममा शाहरुख खान,अनुष्का शर्मा,कट्रिना कैफ सँगै बलिउडका ५० भन्दा धेरै स्टारहरुले अभिनय गरेका छन् । त्यसो त यो फिल्ममा गत वर्ष दिवंगत भएकी बलिउड…
बिगत ४ वर्ष देखी प्रेम सम्बन्धमा गरेका अभिनेता हिमांश कोहली र गायीका नेहा कक्कड बिच पछिल्लो समय बे्रकअपको समाचार आएको छ । समाचारका अनुसार अहिले यि दुईले ईन्टाग्राममा पनि एक अर्कालाई अनफलो गरेका छन् । यारियाँ फिल्मबाट बलिउडमा अभिनय…
बलिउड अभिनेत्री जरीन खानको गाडीमा ठोक्कीएर एक जना मोटरसाईकल चालकको मृत्यु भएको छ । भारतीय संचार माध्यमहरुका अनुसार यो घटना गोवामा भएको हो । दुर्घटना लगत्तै जरीनले मोटरसाईकल चालकलाई अस्पताल लगेकी थिईन । तर हेलमेट नलगाई मोटरसाईकल चलाएको र…
यि हुन १६ करोड ठगी गर्ने फिल्म निर्मात्री !
बलिउड फिल्म निर्मात्री प्रेरणा अरोडालाई ठगी गरेको आरोपमा गत शनिबार मुम्बै पुलिसको आर्थीक अपराध साखाले गिरफ्तार गरेको छ । प्रेरणा माथी १६ करोड ठगी गरेको आरोप लागेको छ । मुम्बै पुलिसले गिरफ्तार गरे लगत्तै प्रेरणाले जमानतको लागी अदालतको…
फेरी तनावमा सलमान खान !
बलिउड सुपरस्टार सलमान खान पछिल्लो समय फेरी तनावमा रहेका छन् । यो पटक उनि तनाबमा रहनुको कारण उनि आफै नभएर उनका एक जना फ्यान रहेका छन् । उत्तर प्रदेशको प्रयाग नगरमा स्थाई घर भएका यि फ्यानले सलमानको नजिकको कर्मचारीलाई बारम्बार फोन गरेर सलमान…
पहिलो तिन दिनमा कती कमायो “केदारनाथ”ले ?
गत सुक्रबारबाट प्रर्दशन भएको बलिउडको फिल्म केदारनाथले पहिलो तिन दिनमा २७ करोड कमाई गरेको समाचार प्रकाशीत भएका छन् । यो फिल्मले पहिलो सुक्रबार ७.२५ करोड शनिबार ९.७५ करोड र आईतबार १०. २५ करोड कमाई गरेको छ । शैफअलि खानकी छोरी सारा अलि…
मिक्का शिंह जेलपर्दा राखीलाई तनाव !
बलिउडका चर्चीत गायक मिका शिंह दुबई पुलिसको फन्दामा परेका छन् । मिकालाई गत बिहिबार राती ३ बजे बुर्ज दुबईबाट गिरफ्तार गरिएको हो । अहिले उनलाई मुरक्काबाद पुलिस चौकीमा राखीएको छ । मिकालाई ब्रजिलका एक नागरीकले यौन शोषणको आरोप लगाएका छन् ।…
एक चुम्मनबाट सुरु भएको थियो रणबिर र दिपिको प्रेम !
बलिउड अभिनेता राणबिर शिंह र अभिनेत्री दिपिका पादुकोणे १४ नोभेम्बरमा बैवाहीक बन्धनमा बाँधीएका छन् । यि दुईको प्रेम २०१२ मा निर्माण भएको संजयलिला भंसालीको फिल्म "राम लिला"बाट सुरु भएको भारतीय संचार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । समाचारका…
सलमान खानले प्रोड्युस गर्दै कपिल शर्माको टिभि शो !
टिम बिचको आपसी बिवादले लामो समय देखी बन्द भएको कपिल शर्माको कमेडी शो फेरी सुरु हुने भएको छ । अब भने यो शो लाई बलिउड अभिनेता सलमान खानले प्रोड्युस गर्ने भएका छन् । अर्थात यो शो का प्रोड्युसर अब सलमान खान हुने छन् । पुरानो समाचार अनुसार…
“मि टु” को शिकार बने नवाज उद्दिन पनि !
पछिल्लो समय हलिउडबाट सुरु भएको मि टु काण्डले बिश्वका धेरै फिल्म ईन्डष्ट्रिलाई चर्चामा ल्याएको छ । अभिनेत्रीहरु अहिले भटाभट आरोप लगाउनमै ब्यस्त रहेका छन् । यसै क्रममा बलिउडका कुसल अभिनेता नवाज उद्दिन सिद्धिकी पनि मि टु को शिकार बनेका छन्…
खराब प्रतिकृया आएपछि हलबाट मुख छोपेर भागे निर्देशक !
तिहारको मौका छोपेर प्रर्दशन गरिएको फिल्म "ठग्स अफ हिन्दुश्तान"को प्रर्दशन भएकै दिन देखी सामाजीक संजालमा निकै मजाक उडाईएको छ । यो फिल्मले प्रर्दशन पुर्व बनाएको क्रेज प्रर्दशन पश्चात सबै भताभुङ्ग भएको छ । यो फिल्मलाई सामाजीक संजाल…